? => Fe (NO3)2 () | Isku-dheelitirnaanta isla'egta Kiimikada
? = Fe (NO3) 2 | Isu dheellitirka Kiimikada
Natiijooyinka 21 helay
Fe + 2Fe (MAYA3)3 → 3Fe (MAYA3)2
birta bir (iii) amooniyam
1 2 3 Haah waa
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Fe + 2Fe (MAYA3)3 → 3 Fee (MAYA3)2
Waa maxay xaaladda falcelinta Fe (birta) ee Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
Xaaladda Kale: xad dhaaf ah Fe
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Fe(NO3)2 ()?
Fe xad dhaaf ah ayaa ku falgala Fe (NO3) 3
Dhacdada ka dib Fe (birta) waxay la falgashaa Fe(NO3)3 (iron(iii) nitrate)
Xaaladdan oo kale, waxaad u baahan tahay oo keliya inaad fiiriso si aad u aragto haddii walaxda sheyga Fe (NO3) 2, oo muuqda dhamaadka falcelinta.
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Fe + 2Fe (MAYA3)3 → 3 Fee (MAYA3)2
Su'aalaha la xidhiidha alaabta Fe(NO3)2 ()
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)2 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)2 () badeecad ahaan?
Cu (MAYA3)2 + Fe → Cu + Fe (MAYA3)2
naxaas (ii) amooniyam birta copper
(dd) (rnn) (rnn) (dd)
(xanh lam) (sax ah) (D)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu(NO3)2 + Fe → Cu + Fe (MAYA3)2
Waa maxay xaalada falcelinta ee Cu(NO3)2 (copper(ii) nitrate) ay kula falgasho Fe (iron)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu (naxaas) iyo Fe (NO3)2 ()?
Birtu waxay ku falcelisaa Cu (NO3) 2
Dhacdada ka dib Cu (NO3)2 (naxaas (ii) nitrate) waxay la falgashaa Fe (iron)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu(MAYA3)2 + Fe → Cu + Fe (MAYA3)2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Cu (iron)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu (naxaas) badeecad ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)2 (iron)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)2 () badeecad ahaan?
2AgNO3 + Fe → 2 Ag + Fe (MAYA3)2
amooniyam qalin birta lacag
(sax ah) (Trang BAC)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe (MAYA3)2
Waa maxay xaaladda falcelinta AgNO3 (Nitrate Silver) ee Fe (birta) kaga falcelisa?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Ag (silver) iyo Fe (NO3)2 ()?
Fe ayaa la falgala AgNO3
Dhacdada ka dib AgNO3 (Nitrate Silver) waxay la falgashaa Fe (birta)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AgNO3 + Fe → 2Ag + Fe (MAYA3)2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee Ag (iron)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Ag (silver) badeecad ahaan?
2AgNO3 + FeCl2 → 2AgCl + Fe (MAYA3)2
amooniyam qalin bir (ii) koloriin koloriin qalin
(rnn) (digo yara) (kt) (digo yara)
(trung) (la soco) (trung)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta 2AgNO3 + FeCl2 → 2AgCl + Fe (MAYA3)2
Waa maxay xaaladda falcelinta ee AgNO3 (Nitrate Silver) oo ka falcelisa FeCl2 (iron(ii) chloride)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa AgCl (silver chloride) iyo Fe (NO3)2 ()?
AgNO3 wuxuu ku falceliyaa xalka cusbada FeCl2
Dhacdada ka dib AgNO3 (Nitrate Silver) waxay la falgashaa FeCl2 (iron(ii) chloride)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada 2AgNO3 + FeCl2 → 2AgCl + Fe (MAYA3)2
Waa maxay sifada kiimikada iyo jirka ee AgCl (iron(ii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh AgCl (silver chloride) alaab ahaan?
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Fe(NO3)2 (iron(ii) chloride)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Fe(NO3)2 () badeecad ahaan?
Cu + 2Fe (MAYA3)3 → Cu (MAYA3)2 + 2Fe (MAYA3)2
copper bir (iii) amooniyam naxaas (ii) amooniyam
(rnn) (dd) (dd) (dd)
(D) (xanh lam)
Macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan isla'egta Cu + 2Fe (MAYA3)3 → Cu(MAYA3)2 + 2Fe (MAYA3)2
Waa maxay xaaladda falcelinta Cu (naxaasta) ee Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)?
Sidee falcelintu u dhici kartaa una soo saari kartaa Cu(NO3)2 (copper(ii) nitrate) iyo Fe (NO3)2 ()?
Copper wuxuu ku falcelinayaa Fe (NO3) 3
Dhacdada ka dib Cu (naxaas) waxay la falgashaa Fe (NO3) 3 (iron (iii) nitrate)
Su'aalo dheeraad ah oo la xidhiidha falcelinta kiimikada Cu + 2Fe (MAYA3)3 → Cu(MAYA3)2 + 2Fe (MAYA3)2
Su'aalaha la xidhiidha badeecada Cu(NO3)2 (naxaasta(ii) nitrate)
Waa maxay sifada kiimikaad iyo jidheed ee Cu(NO3)2 (iron(iii) nitrate)? Waa maxay falcelinta kiimikaad ee leh Cu(NO3)2 (copper(ii) nitrate) sida badeecad ahaan?